T-Shirt Ragga, T-Shirtka Ragga, T-Shirt dheddig, funaanad tuduc ah - Aragti
Waxaan haynaa ku dhowaad 10 sano oo waayo-aragnimo ah si aan uga caawino macaamiisheenna baahiyahooda astaanta dharka gaarka ah.
Tayadu waa dhaqankeenna, sidoo kale waa mudnaanteenna. Waxaan had iyo jeer ku adkaysanahay mabda'a ah "Macaamiisha Koowaad, Ta ugu Horeysa Tayo".
Waxaan haynaa koox naqshadeysan oo khubaro ah, waxay kaa caawin karaan inaad sawirato sawir saameyn leh sida aad male u tahay.
xafiiska xafiiska caadadii dharka suufka dharka xafiiska cust ...
caadadii xayeysiinta jaban jumlada socodka 100 ...
caadadii haweenka seddex-geesood ah 50% polyester 25% ...
Nanchang Vision Dharka Co., Ltd. wuxuu ku yaal magaalada Nanchang, gobolka Jiangxi, Shiinaha. Waxaan leenahay warshad dhar u gaar ah iyo warshad daabacaadda, oo leh ku dhowaad 10 sano oo waayo-aragnimo ah si aan uga caawino macaamiisheenna baahiyahooda astaanta dharka, iyagoo siinaya daabacaad caado ah, calaamadeynta astaanta astaanta, daabacaadda kuleylka, sublimation iyo daabacaadda shaashadda xariirta. Tayadu waa dhaqankeenna, sidoo kale waa mudnaanteenna. Waxaan had iyo jeer ku adkeynaa mabda'a ah "Macaamiisha Koowaad, Tayada Ugu Horeysa".